Ubuncwane obufihliweyo Casita
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguKatie
UKatie unezimvo eziyi-26 zezinye iindawo.
Indlu yeendwendwe/casita kanye elunxwemeni! Hamba ngaphantsi kwemizuzu emi-3 ukuya emanzini, fikelela elunxwemeni ukusuka kwiyadi engaphambili. Yabelana ngeehammocks, ichibi elincinci kunye nesango langaphambili kunye nendlu enkulu. Le yi "studio" style casita enegumbi lokulala elivulekileyo/ibhafu eyi-1, ibhedi eyi-1 epheleleyo (yomtshato) kunye nebhedi enye enye, ifenitshala kunye nekhitshi. Relax kwi-hammocks yangaphambili okanye iphuli encinci ngelixa ujonge amaza kwaye umamele izandi zolwandle, iparadesi ecocekileyo!
Ukuba indlu enkulu ayisebenzisi igaraji, unokuyisebenzisa nayo. Ungangeni kwindlu enkulu ngaphandle kokuba uzihlawule zombini. umgcini-ndlu unokusebenzisa umatshini wokuhlamba impahla kwaye uya kuhlamba impahla yakho ngentlawulo eyongezelelweyo ehlawulwa ngemali ezinkozo kuye.
Eyona lali inobubele nengakhe ndandwendwela. Ndikhe ndaya kwicawe yamaKristu yasekhaya, ndanamaqela asekuhlaleni ukuya ekhayeni lam usuku elunxwemeni, ndatya intlanzi entsha ebanjiswa mihla le kwaye ndiya kuhlala apho ngokusisigxina kwiminyaka emi-5.
Umalume wam, uMigdonio ukufuphi, yaye uthetha iSpanish kuphela. Unokuqhagamshelana naye ukuba unemibuzo. Inombolo yakhe yefowuni ithi +50584659732 (i-moviestar iselfowuni)